Homo neanderthalensis: njirimara, mmalite na mmalite | Meteorology netwọkụ
Portillo nke German | 22/10/2021 10:00 | Ciencia
El Homo neanderthalensis a makwaara dị ka Neanderthal bụ ụdị mmadụ nke mepere emepe na Europe site n'ihe dị ka afọ 230.000 gara aga ruo ihe dị ka afọ 28.000 gara aga. A maara ya site n'aha Neanderthal na, n'adịghị ka ụdị ndị ọzọ nke genus Homo, ọ na-etolite n'ụzọ zuru ezu ma bi na mpaghara Europe.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị njirimara niile, mbido na mmalite nke Homo neanderthalensis.
1 Mmalite nke Homo Neanderthalensis
2 Onu ogugu Homo Neanderthalensis
Mmalite nke Homo Neanderthalensis
Obodo nke Europe, achọpụtala ihe akaebe na ọ sitere na Heidelbergs, bụ ndị si Africa bịa Europe n'oge Pleistocene n'etiti. N'ihe gbasara evolushọn mmadụ, enwere mmekọrịta ọtụtụ iri afọ na Homo sapiens, n'agbanyeghị na edoghị anya. Emere nyocha nke ọma gbasara nkwụnye ego achọpụtara yana enwere obi abụọ. Ihe kachasị mma bụ na ha bụ ụdị abụọ dị iche iche, ọ bụ ezie na ha bụ otu ụdị, ha na-ebikọ ọnụ n'otu oge.
Ọ bụ ụdị ihe a dị iche n'etiti mmadụ na Homo sapiens n'ụdị anatomical. Ikike ụbụrụ dị ukwuu, ọbụna karịa nke ndị oge a. Nke a bụ otu n'ime ihe mere ndị ọkachamara ji enwe obi abụọ na ihe kpatara mkpochapụ ya. Ozizi kacha pụta ìhè na-egosi na ọnụ ọgụgụ Homo sapiens sitere n'Africa karịrị ha.
Anyị maara na kọntinent a bụ ebe obibi nke mmadụ, n'ihi na ọ bụ ụdị anyị na-apụta na kọntinent a. Kemgbe ahụ, ndị nna nna nke mmadụ gbasaa ruo n'akụkụ ndị ọzọ nke ụwa wee chịa ya kpam kpam. Na usoro evolushọn, ọ bụghị naanị gị.
N'ụzọ dị otú a, ụmụ mmadụ nke ụdị dị iche iche nke otu ụdị nwere ike ịpụta na Europe. Neanderthals ha nwere ikike ịghọ ụdị na -achị achị. N'oge oge ice, ụdị nke o si malite ga-agbanwe ebe obibi ya. N'ihi oke oyi na ọnọdụ gburugburu ebe obibi na-adịghị mma, nke a manyere ha ịkwaga ndịda. N'ime narị afọ ndị gafeworonụ, ọnọdụ dị iche iche nke ịnọpụ iche emeela ka ọ dị mkpa ime mgbanwe na-eduga na evolushọn nke hominids.
Mgbe oge ice kwụsịrị, ha malitere iyi Neanderthals. Nke a bụ ebe ha na -agbanwe site n'otu ụdị dị iche iche gaa n'ọzọ. Nke a bụ ka Homo neanderthalensis.
Ndị bi na Homo neanderthalensis
Ọ bụ ezie na ọ dịla kemgbe ogologo oge, o nwebeghị ọnụ ọgụgụ buru ibu. A na-eme atụmatụ na n’ime afọ 200.000 o biri n’ụwa, ndị bi na ya agafeghị 7.000. Nke a bụ ọnụ ọgụgụ pere mpe, n'ihi na obere obodo ọ bụla taa nwere ndị bi na ya. Oge dị ebube nke ụdị a mere ihe dịka 100.000 afọ gara aga. Ngwa ndị achọpụtara na-eme ka ndị sayensị kwenye na ha nwere ikike dị ukwuu maka mmepe ọgụgụ isi.
N'agbanyeghị na ọnụ ọgụgụ ha dị ntakịrị, a chọtara anụ ọhịa ndị gbasasịrị nke ukwuu, nke na-egosi na a na-ahụ ha n'ọtụtụ mpaghara Europe. Ụfọdụ ndị ọkachamara kwenyere na ha gaara erute n'Ebe Etiti Eshia. Mmekọrịta dị n'etiti Neanderthals na Homo sapiens mgbe ụfọdụ, ọ na-emegide echiche nke linear evolushọn. Ọnọdụ dị ugbu a dị nnọọ iche.
Ọtụtụ ụdị ụdị a ekerela ala na mpaghara dị iche iche ma bikọkwa na mpaghara ụfọdụ. Neanderthals bi na Europe. Homo sapiens bi na Africa na ụdị ndị ọzọ dị ka Homo erectus bịara n'ebe ọwụwa anyanwụ.
Usoro nyocha nke eji amụtakwu gbasara ụdị a na-enyere aka n'ikpughe ọdịdị mmadụ. Ọ bụ teknụzụ nyocha DNA. Dị ka anyị niile maara, mgbe Homo sapiens hapụrụ Africa, Homo sapiens na Neanderthals biri na Europe. Mana ntakịrị ihe amachaghị maka ibikọ ọnụ ha. N'ihi nnyocha e bipụtara na Neanderthal genome, anyị maara na ụmụ mmadụ ka nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 3% Neanderthal DNA. Nke a pụtara na enwere njikọ n'etiti ụdị abụọ ahụ, n'agbanyeghị n'ụzọ doro anya.
Mmalite nke hybridization n'etiti ụdị abụọ a were ogologo oge karịa ka e chere na mbụ. N'ihe dị ka 100.000 afọ gara aga, ndị mmadụ n'ime ụdị abụọ a dị n'otu ebe. Ụfọdụ okirikiri sayensị ka na-arụ ụka maka mkpochapụ nke Neanderthals. Enwere ụfọdụ echiche, mana ọ nweghị nke enwere ike guzobe dịka nke ziri ezi. Mpụta nke data ọhụrụ yiri ka ọ gafere kpọmkwem oge ụdị ahụ kwụsịrị.
A na-eme atụmatụ na mgbe Europe malitere ịjụ oyi nke ukwuu, ha na-amalite ịla n'iyi, nke pụtara na mbelata nke ihe ndị sitere n'okike. N'ihe banyere ihe mere o ji funahụ ya, ụfọdụ ndị ọkachamara kwuru na ọ pụrụ ịbụ mgbanwe ihu igwe ka anyị kwuburu okwu ya. Ndị ọkachamara ndị ọzọ na-ekwu na ihe kpatara ọdịda Neanderthals nwere ike ịbụ n'ihi ọbịbịa Homo sapiens. Nke a tiori na-adịghị nke ọma tọrọ ntọala, n'ihi na anyị ahụla na e nwere a cross n'etiti ha.
Ya mere, echiche ikpeazụ kacha kwesị ekwesị nke a nwara igosi bụ nke ahụ Ọnụ ọgụgụ nke Homo sapiens dị 10 karịa ọnụ ọgụgụ Neanderthals. Nke a butere asọmpi maka ihe ndị sitere n'okike na ọrịa ụfọdụ metụtara Neanderthals kama Homo sapiens. Iji mee nke a, anyị na-agbakwunye obe n'etiti ụdị abụọ ahụ, nke pụtara na-apụ n'anya nke ụdị gara aga.
N'ime ihe omimi Neanderthal nke achọpụtara, anyị chọpụtara na ụfọdụ n'ime ha na-enye ozi zuru oke iji ghọta ọdịdị anụ ahụ ha. Ha kwekọrịtara na oyi na-atụ n'ihi na ha aghaghị ịdị ndụ n'ebe e ji oge ikpeazụ ice mara. Nke a na -amanye ha ime mgbanwe ka ihu igwe dị oke oyi wee dị ndụ. N'ime mgbanwe ndị a, anyị na-ahụ na oge na-adị mkpụmkpụ. Imi dịkwa obosara ka enwe ike iburu ísì ahụ site n'ebe dị anya. Ha apụghị iche maka ịdị elu ha ebe ọ nwere nkezi ịdị elu nke 1.65 mita.
N'agbanyeghị na e chere na mbụ nri Neanderthal bụ isi anụ anụNnyocha ndị e mere n'oge na-adịbeghị anya egosila na nri ha dị iche iche ma kwekọọ na gburugburu ebe obibi. Ha gụnyere mollusks, azụ, akàrà, nduru na nnụnụ, yana mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri bara ụba (ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 80% nke nri ha).
Ha maara ọkụ na-eji ya na kichin, na a nnọọ rudimentary pharmacology, nke na-agụnye osisi osisi poplar dị ka ihe na-ebelata ihe mgbu. Otu eziokwu dị mkpa bụ na sedimenti ya na-egosi ụdị ụfọdụ nke anụ oriri, nke doro anya na ọ dịghị ihe jikọrọ ya na oge ahụ.
Enwere m olileanya na iji ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere Homo neanderthalensis.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Homo neanderthalensis
Ọsọ nke ụda